China Manufacturer namboarina namboarina LED Light Glass Neon Sign ho an'ny Shop Bar Store Home Decoration mpanamboatra sy mpamatsy | PDL
Stainless vy 3d famantarana taratasy dokam-barotra Metal Si ...
Fivarotana LED Sign Sign out Illumined Signage Front Lit ...
New Style Stainless vy nitarina Front Lit & Halo ...
Custom nitondra CNC nanapaka volamena Stainless Steel Backlit ...
Mpanamboatra namboarina namboarina LED Light Light Glass Neon Sign ho an'ny Shop Bar Store Home Decoration
1.Materialy: Tube Tube, Takelaka akrilika na talantalana metaly
2. Misy santionany vita tanana sy maimaim-poana
3.Ny fotoana famokarana dia 3-4 andro
4. Ny ora fandefasana dia 3-5 andro
Fonosana 5.Safe: bubble ho an'ny raharaha hazo anatiny sy telo-ply
Size:Namboarina manokana, Tube vita tamin'ny tànana tena izy, TSY LED. Raha mila habe hafa ianao, mifandraisa aminay, azonay atao ny mahafeno ireo takiana samihafa momba ny habe, ny loko na ny maody. EXPRESS: Fandefasana (DHL na FedEx): 2 ~ 3 andro.
Color:Araka ny aseho amin'ny sary (Ireo famantarana dia manintona kokoa noho ny sary :). Raha mila miloko ny hafa ianao dia andefaso ny hafatra.
TOSIKARATRA INput Transformer:100-240V. Ny entana dia miaraka amin'ny plug izay mifanaraka amin'ny firenena rehetra. Mavesatra ary tsy ho mafana be rehefa ampiasaina. Nandalo fitsapana tsara izahay talohan'ny nandefasana azy, namboarina teo amin'ny takelaka famantarana acrylic niaraka tamin'ny switch on-off tamin'ny tadin'ny herinaratra, mora ny mitondra azy, mihantona ary voafehy.
fampiharana:Ny jiro neon dia azo ampiasaina ho jiro jiro, jiro amin'ny rindrin'ny rindrina ary fanomezana manokana ho anao manokana. Tsara ho an'ny trano fety amoron-dranomasina trano fisakafoanana efitrano fandraisam-bahiny garazy fivarotana sy ny fialan-tsasatra ravaky. Izy io koa dia fanomezana tsara ho an'ny fanomezana tsingerintaona, tsingerintaona, valisoa na fitiavana.
fanoloana:Ny fantsona rehetra dia azo soloina, indraindray ny fantsona dia tapaka mandritra ny fitaterana, azafady mba andefaso anay ny sary mba hampisehoana ireo faritra tapaka, hiatrika izany izahay ao anatin'ny 24 ora ary handamina ny fandefasana ny fanoloana izay ho lany aminay. FANAMARIHANA: famantarana famantarana neon isan-taona ny kalitaon'ny neon, ny famantarana Neon dia vokatra vita tanana, raha tsy ny olan'ny kalitao dia tsy manaiky ny fiverenana izahay. Miangavy anao amin-kafanam-po azafady.
Material Eo aloha: Tube Tube
Lafiny: Tube Tube
Ao anatiny: LED tsy tantera-drano
Averina: talantalana akrilika / vy
Size Volavola namboarina
Color Namboarina tamin'ny tabilao loko
mpanova Vokatra: 5V sy 12V
hanazava Hazavana hazavana miaraka amina karazana maody maody LED
Loharano maivana Module LED / tariby LED / LED miharihary
Warranty 4 taona
hateviny Volavola namboarina
Salanisan'ny androm-piainana Maherin'ny 35000hrs
Cetification Taona, RoHs, Ul
Application Shops / Hospital / Companies / hotely / trano fisakafoanana / sns.
Fonosana Bubble ao anaty ary kitapo hazo misy paingotra telo any ivelany
Payment L / C, TT, PayPal, Western Union, Money Gram, Escrow
fandefasana Amin'ny alàlan'ny express (DHL, FedEx, TNT, UPS sns.), 3-5 andro
Amin'ny alàlan'ny rivotra, 5-7 andro
Amin'ny alàlan'ny sambo: 25-35days
Fe-potoana 3-5 andro isaky ny seta
Fepetra fandoavana Fametrahana 30% ary fifandanjana 70% aorian'ny sary fanamafisana
Previous: Fivarotana mafana LED LED Neon Sign Wall Mounted LED Flex Neon Light Advertising Sign
Manaraka: Taratasy namboarina tamin'ny taratasy mazava ho an'ny taratasin'ny LED any ivelany
F1: Inona no antoka momba ny vokatrao?
A1: Ny Warranty ho an'ny acrylic dia 5 taona; Ho an'ny LED dia 4 taona; ho an'ny trafo dia 3 taona.
F2: Inona ny mari-pana miasa?
A2: Miasa mari-pana malalaka amin'ny -40 ° C ka hatramin'ny 80 ° C.
F3: Azonao atao ve ny manamboatra endrika, endrika ary litera manokana?
A3: Eny, afaka manao ny endriny, ny endriny, ny logo ary ny litera ilain'ny mpanjifa isika.
F4: Ahoana no ahazoana ny vidin'ny vokatro?
A4: Azonao atao ny mandefa ny antsipirian'ny volavolanao amin'ny mailaka anay na mifandray amin'ny mpitantana varotra an-tserasera
A4: .Ny vidiny rehetra etsy ambony dia isaina amin'ny isa lehibe indrindra; raha mihoatra ny 1 metatra ny halavany sy ny sakany, dia metatra toradroa izy ireo
F5: Tsy manana sary aho, azonao atao ve ny mamolavola izany ho ahy?
A5: Eny, azonay natao ny mamolavola azy ho anao araka ny vokany tadiavinao
F6: Inona ny fotoana itarihana ny filaminana eo ho eo? Amin'ny firy izao ny ora fandefasana?
A6: Ny fotoana itarihana ho an'ny filaharana dia 3-5 andro. Ary 3-5 andro amin'ny express; 5-6 andro amin'ny alàlan'ny fanontana Air. 25-25 andro an-dranomasina.
F7: Hiatrika ny herinaratra eo an-toerana ve ny sonia?
A7: Azafady mba alao antoka fa homena ny mpanova avy eo.
F8: Ahoana no hametrahako ny famantarana?
A8: Ny taratasy fametrahana 1: 1 dia halefa miaraka amin'ny vokatrao.
F9: Inona no karazana fonosana ampiasainao?
A9: Bubble ao anaty ary boaty hazo misy ply telo any ivelany
F10: Hampiasaina eny ivelany ny famantarana, tsy mahazaka rano ve izy ireo?
A10: ny fitaovana rehetra nampiasainay dia antirust ary entina ao anaty ny famantarana fa tsy tantera-drano.
Famantarana manokana Neon Led